तपाई बिहान खाली पेटमा दूध चिया पिउनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यस्ता समस्या हुन सक्छन् ! - LiveMandu
तपाई बिहान खाली पेटमा दूध चिया पिउनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यस्ता समस्या हुन सक्छन् !
बिहान उठ्ने वित्तिकै नेपालीहरुको चिया पिउने बानी छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ। कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन्। अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन्।के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हानी हुनसक्ने देखाएका छन्।
चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ। चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने एण्टिअक्सिडेन्ट नष्ट हुन्छ।खाली पेटमा दूध चिया पिउदा थकान बढ्ने, एसिडिटी बढ्ने हुन्छ। यसले पेटको अल्सर पनि हुनसक्छ। दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापिएको अध्ययन अनुसार तातो चिया पिउने मानिसमा खाना खाने नली तथा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना आठ गुणाबढी हुन्छ ।
धेरै तातो चिया पिउने मानिसमा मनतातो चिया पिउने मानिसको तुलनामा क्यान्सरको खतरा आठ गुणाबढी हुन्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो अध्ययन ५० हजार मानिसमा गरिएको थियो । तातो चियाले घाँटीमा रहेका नरम तन्तुहरुलाई क्षति गर्छ ।
दूध चियाले मोटोपन बढाउछ। चियाले मधुमेहका बिरामीमा चिनिको नियन्त्रण बिग्रन सक्छ। दूध चियाको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको कोलेस्टेरोल हो। दुध चियामा चियापत्तिको बढि प्रयोग हुन्छ। जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। चियापत्तिको बढी प्रयोगले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढी भएर मुटुको चालसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।
Tags: Health tipshealthy foodmilk tea
The reasons behind sudden death of youth
जाडोका घरेलु उपचारहरु
‘हृदयघात’को जोखिम यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना भारइसको लक्षणमिल्दो स्वास्थ्य समस्या, जुगल गाउँपालिकाले गर्यो पत्राचार
के चीनले कोरोना भाइरसको मृतक संख्या लुकाइरहेको त छैन ?
सालकले मानवमा फैलाएको हुनसक्छ ‘कोरोना भाइरस’को संक्रमणः अध्ययन
साउदी अरबमा बर्ड फ्लूको संक्रमण
हो म ‘विर्य डोनर’ हुँ
Nepal Airlines Flight Departs from Wuhan with Nepali Students
सरकारको विपक्षी भएकै कारण आफु राष्ट्रिय पुरस्कारबाट बन्चित: प्रकाश झा
‘ओमर खय्याम’ एउटा इरानी कवि अनि उनका कविताहरु
टम एण्ड जेरी कार्टुनको ८० वर्ष
KESRICK WILLIAMS IN POKHARA RHINOS